गिनिजको जीवनमा सजिना आएपछि……. – Kanika Khabar
गिनिजको जीवनमा सजिना आएपछि…….
Kanika Khabar २४ बैशाख २०७८, शुक्रबार १९:०० May 7, 2021 मा प्रकाशित
नेपाली रंगमञ्चका सालिन व्यक्तित्व गिनिज भट्टराईको जीवनमा सजिनाको इन्ट्री भएको छ । गिनिजको रङगमञ्चमा जब सजिनाको इन्ट्री भयो तब गिनिजले जीवन सार्थक भएको महसुस गरे ।
नेपाली सांगीतिक बजारमा आफ्नै मतापमा जन्दै आएका गिनिजको पछिल्लो सांगीतिक कोसेली आज बजारमा सार्वजनिक भएको छ । ‘तिमीलाई नै’ बोलको गीतमा गिनिज र सजिनाको फिचर जमेको छ । निरर्थक पाइला बोकेर जीवनमा भौतारिएका गिनिजको जीवनलाई सार्थक बनाउन सजिनाको आगमन भएको कथानकमा यो जोडी जमेको छ ।
छिरिङ लामाको स्वर÷शब्द÷संगीतमा रहेको ‘तिमीले नै’ बोलमा रहेको गति हाम्रो इन्टरटेज्मेन्ट युट्युब च्यानलले सार्वजनिक गरेको हो । प्रवेश गिरीको छायांकन तथा फाराज अर्पणको निर्देशन र सम्पादनमा तयार भएको यो गीतले नेपाली पप गीतका पारखीलाई मात्र होइन सुगम संगीतका पारखीलाई समेत समेट्ने ल्याकत राखेको छ ।